शाओमी मी T टी र मी T टी प्रो जून १२ मा युरोपमा आइपुग्छन् Androidsis
शाओमी मी T टमा पहिले नै रिलीज मिति छ
केहि दिन अघि यो कुरा पत्ता लाग्यो कि शाओमी मी T टी तिनीहरू चाँडै युरोपमा सुरू गर्न लागेका थिए। केही दिन पछि पहिलो फोटो र विवरण यी नयाँ फोनका बारे। यी नामहरू हुन् जुन कम्पनीले तपाईंलाई दिएको छ रेडमी K20 र K20 प्रो मा यूरोप मा यसको आधिकारिक प्रक्षेपण को लागी। अन्तमा, हामीसँग पहिले नै थप डेटा छ।
किनकि हामीलाई थाहा छ यी Xiaomi Mi 9T र Mi 9T Pro कहिले युरोपमा सुरू हुन गइरहेको छ? चिनियाँ ब्रान्डको। दुई मोडेलहरू फर्मको लागि नयाँ सफलता हुन बोलाउँदछन्, विशेष गरी किनभने उनीहरू पैसाको लागि ठूलो मूल्यको साथ आउनेछन्, जसले उनीहरूलाई यसको दायरामा अत्यधिक चाहना बनाउँदछ।
कम्पनीले आफ्नो सामाजिक नेटवर्क यी मॉडलहरूको प्रक्षेपण साझा गर्न प्रयोग गर्न चाहान्थ्यो। यो अन्ततः जून १२ मा हुनेछ जब हामी यी Xiaomi Mi 9T र Mi 9T प्रो यूरोपमा आधिकारिक रूपमा किन्न सक्छौं। त्यसैले हामीले यसको लागि धेरै लामो पर्खनु पर्दैन, हप्तामा यो सम्भव हुनेछ।
केवल १० दिन बाँकी छ! नयाँ #Mi9 सदस्य जून १२ मा सुरूवात हुनेछ! के तपाइँ सबैको लागि थप नवीनताका लागि तयार हुनुहुन्छ? #Mi9T? #PopUpInStyle pic.twitter.com/TY8FTVBKaY
- Xiaomi # 5GIsHere (@ Xiaomi) जुन 3, 2019
यद्यपि हामीसँग पहिले नै मिति छ जब हामी यी दुई फोनहरू चिनियाँ ब्रान्डबाट अपेक्षा गर्न सक्छौं, तिनीहरूको मूल्यहरु बारे कुनै जानकारी छैन। यस अर्थमा तिनीहरूले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन्। तर पक्कै तिनीहरू आफ्नो दायरा भित्र दुई धेरै धेरै पहुँच योग्य मोडेलहरू हुनेछन्।
तसर्थ, हामीले कम्पनी आफैंमा पर्खनुपर्नेछ कि हामीलाई यी शाओमी मी T टी र एमआई more टी प्रोको बारेमा थप सुरागहरू दिनुहोस् जुन बजारमा पक्कै पनि एक नयाँ सफलता हुनेछ। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, चश्मा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन रेडमी K20 र K20 प्रो का सम्बन्धमा। केवल नाम परिवर्तन गरिएको छ र Xiaomi लोगो थपियो।
एक हप्तामा तिनीहरू पहिल्यै युरोपियन बजारमा हुनुपर्दछ, सायद त्यहाँ उनीहरूलाई परिचय गराउन केहि सानो कार्यक्रम छ यूरोपियन बजारमा। जे भए पनि, हामी छिट्टै स्पेनमा Xiaomi Mi 9T र MI 9T Pro को मूल्यहरू जान्न आशा गर्दछौं। साथै फोनका सबै संस्करणहरू सुरूवात भइरहेको छ कि छैन भनेर जान्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » शाओमी मी T टमा पहिले नै रिलीज मिति छ
कसरी टेलिग्राममा गोप्य कुराकानी सिर्जना गर्ने सन्देशहरूको साथ
एक सामसु executive कार्यकारीलाई धोखाधडी र प्रमाण नष्ट गर्नका लागि पक्राउ गरिएको थियो